खेल लेडी डल आधिकारिक रूपमा अधिकृत वास्तविकता सिलिकन प्रेम गुड़िया डीलर
Gamelady Doll 2022 लोकप्रिय नयाँ सिलिकन सेक्स डल स्टोर
यो गेमलेडी पुतली 2022 को लागि एक महान नयाँ प्रेम पुतली हो। धेरै सिलिकन प्रेम पुतली भन्दा बढी यथार्थवादी देखिन्छ। गेमलेडी प्रेम पुतलीहरूको यथार्थपरक अनुहार, नरम ठूला बटुवा र टाइट योनिहरू हुन्छन्। तिनीहरू सिलिकन पुतलीहरूको रमाईलो नयाँ ब्रान्ड हुन्, जस्तै XYCOLO पुतली र Zelex पुतली, दुवै सिलिकन सेक्स डल बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्, तर फरक रियल हो गेमलेडी पुतलीहरू महिला खेल पात्रहरूको उत्पादनमा बढी केन्द्रित छन्।
वास्तविकता गेमलेडी डलमा भर्चुअल खेलहरू ल्याउँदै
के तपाइँसँग मनपर्ने खेल चरित्र छ? महिलाहरु, विशेष गरी, स्वेच्छाचारी शरीर र आकर्षक स्तनहरू हुन्छन्। तपाईंसँग घरमा वास्तविक गेमिङ लेडी क्यारेक्टर ल्याउने कल्पनाहरू हुनुपर्छ। के यो सही हो? गेम लेडी डल ब्रान्ड जसले गेम पात्रहरूलाई वास्तविकतामा ल्याउँछ।
उच्च-अन्त यथार्थवादी प्रेम रमाईलो वास्तविक पुतली
तपाईंले त्यो नोट गर्नुपर्दछ गेमलेडी सेक्स डल यस क्षणमा केहि उत्पादनहरू छन्, तर तिनीहरू उच्च विवरणको साथ सुरू गर्न थाले वास्तविक पुतली, यी वास्तविक पुतलीहरू वास्तवमा खेल बाहिर सेक्स पुतली जस्तै देखिन्छन्, तिनीहरू धेरै जीवन्त छन्। यदि तपाइँ कहिल्यै चाहनु भएको छ भने सेक्स गुडिया खेल चरित्रको लागि, अब तपाइँको अन्तमा उनको मौका छ। सबै खेल लेडी सिलिकन पुतली पूर्वनिर्धारित विकल्पहरू समावेश छन्: चल आँखा, यथार्थवादी शरीर मेकअप, औंला कंकाल, जेल स्तन, प्रत्यारोपित भौं र eyelashes संग EVO कंकाल।
के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कि सबैभन्दा यथार्थवादी सेक्स डल कसले बनाउँछ? सेक्स डलको विगत र वर्तमान जान्न चाहनुहुन्छ? तपाईलाई थाहा हुनु पर्ने सबै कुरा यहाँ छ। urdolls सँग यौन पुतली इतिहास फाइल छ, हेर्नुहोस् कसले बनायो सेक्स डल ?.
Gamelady सिलिकन पुतली विस्तृत उचाइ डेटा तुलना चार्ट:
Gamelady गुड़िया जेल स्तन प्रविधि भिडियो।